Juventus oo dooneysa inay Janaayo lasoo wareegto xidiga Schalke 04 Julian Draxler. - Caasimada Online
Home Warar Juventus oo dooneysa inay Janaayo lasoo wareegto xidiga Schalke 04 Julian Draxler.
Juventus oo dooneysa inay Janaayo lasoo wareegto xidiga Schalke 04 Julian Draxler.
Juventus ayaa lasoo werinayaa inay Janaayo xiiseyneyso xasiixa ciyaaryahaka kooxda Schalke Julian Draxler, sida ay tebineyso jariirada Italian Press.
19 jirkaan kubad qaabeeyaha ah ayaa xilli ciyaareedkaan ku dhowaa inuu ciyaaro kulan kasta ee Die Knappen. Wuxuuna saftay lix kulan sideedii kulan ee ugu horeysay, isagoo kooxda Huub Stevens ka caawiyey inay xirato booska sedaxaad ee Bundesliga.
Bianconeri ayaa isha ku heysay ciyaaryahanka qadka dhexe, laakiin waxay tartan la geli doonaan Bayern Munich, sida uu tebinaayo Calcio Mercatio.
Xidigaan ayaa loo qiimeeyaa, ciyaaryahankii labaad ee taariikhda ugu fiicnaa eek a mid noqda kooxaha sar sare ee Jarmalka, tan iyo markii uu si aad ah uga soo dhex dhalaalay kooxda Gelsenkirchen, wuxuuna xulkiisa Germany u ciyaaray laba kulan.
Schalke ayaa xidigaan ku qiimeyn doonta aduun lacageeda gaaraya 12 milyan oo euro.